dd: ohatra amin'ity baiko mahabe | Avy amin'ny Linux
dd: ohatra momba ity baiko maro samihafa ity
El dd command dia malaza amin'ny Linux. Didy somary marobe izy io, saingy vitsy no mahalala izay azony atao ankoatry ny fametahana na fampahalalana fonosana. Izany no antony nanapahako hevitra hamorona ity tutorial tsotra ity miaraka amin'ny ohatra azo ampiharina amin'ny mety hataon'ity baiko dd ity. Izy rehetra dia ohatra tsotra amin'ny zavatra mila atao isan'andro.
Heveriko fa efa fantatrao ny atao hoe dd didin'ny fianakaviana UNIX ary izany dia mamela ny fanaovana kopia sy famadihana angona amin'ny ambaratonga ambany, noho izany dia matanjaka be izy io. Nampiasaina matetika izy io mba hanaovana backup na kopia backup amin'ny haino aman-jery fitehirizana sasany, fa koa mba hamindrana angona manokana, hivadika karazana encoding iray hafa, sns Na dia toa fitaovana tena tsotra aza io dia mbola ampiasaina be ...
ny sasany ohatra azo ampiharina sy tsotra amin'ity baiko ity dia:
Clone hard drive iray mankany amin'ny iray hafa ka ny sdb dia kopian'ny atiny sda:
Manaova kopia nomaniny ho solon'izay lahatahiry, rakitra na fizarazarana ary mamorona sary (IMG, ISO, ...):
Avereno ny nomaniny ho solon'izay teo aloha:
Mamorona ISO an'ny kapila optika:
Hamafa angona avy amin'ny kapila mafy amin'ny alàlan'ny fanoratana azy io:
Mamorona rakitra misy habe iray, amin'ity tranga ity 10 bytes, saingy afaka misafidy ny vola tadiavinao ianao, ary raha manova ny isa ka hatramin'ny 2 ianao, ohatra, dia avo roa heny izany:
Manantena aho fa nanampy anao ity fampianarana ity, satria hitanao fa tena tsotra izy io, nefa afaka mamonjy anao mametraka programa fanampiny hafa. Ohatra, raha te-hanao ISO ny CD / DVD / BD ianao dia afaka mampiasa dd fa tsy manana rindrambaiko manokana amin'izany. Mampatsiahy ahy / dev / loop na ilay fitaovana loop koa izany, izay afaka manampy anao hametaka ISO sy hiditra ao anatiny tsy misy rindrambaiko fanampiny hafa… Tadidio fa afaka mahita fampahalalana bebe kokoa momba ny dd miaraka amin'ny "man dd" ianao. Manana safidy betsaka kokoa izay mety hahitanao fa mahaliana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » dd: ohatra momba ity baiko maro samihafa ity
FFmpeg 4.2 "Ada": famoahana vaovao miaraka amin'ny vaovao manandanja
Valve dia manandrana manatsara ny olan'ny Dota 2